नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ सदस्यीय नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तित्व चाहीं कुनै अदृश्य रसायनवाट जोडिएका जस्तो लाग्दछन । उनीहरुको राजनीतिक शैलीमा कुनै समानता देखिदैन । भावात्मक रुपले पनि सामीप्यमा कहिल्यै नपुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वीच रहंदा बस्दा दूरी आउने निश्चित नै छ । त्यसो त, अहिले प्रकटमा कुनै त्यस्तो दूरी देखिएको छैन । प्रचण्डले जे आशा र अपेक्षा गरेका होलान त्यो छिटै यथार्थमा परिणत होला पनि र केही समय लाग्ला पनि ।प्रचण्डले पार्टी एकता आपूm जोगीहुन गरेका पक्कै होइनन ।
बैठकको रेडियोमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बक्तब्य धाराप्रवाह छ । उनी आफना सहयोगी मन्त्रीहरुलाई सम्वोधन गर्दैछन ः ।।।मेरा सबै मन्त्री इमान्दार र जिम्मेवार छन । मलाई थाह छ, तपाईंहरु कसैले केही गर्नु भएको छैन । यो सरकारलाई बदनाम गराउन केही तत्वहरु लागेका छन । तपाईंहरु ती तत्वबाट टाढा रहनु होला र चनाखो रहनु होला । कुरै कुरामा कुरा लटपट्याउलान । होशियार रहनु होला ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस पार्टी सरकारसंग कुनै खेल खेल्ने अवस्थामा नभएको बेला देशमा समृध्दि ल्याउने नाराका साथ स्थापित सरकारका विरुध्द कुन कुन तत्व लागेका होलान ? अहिले सरकारसंग राजनीतिक तत्वभन्दा पनि अन्य तत्व बढी टांसिएको परिलक्षित हुन थालेको छ । काण्डहरुको लामै फिहरिस्त पनि तयार गर्दैछन पत्रकारहरु । यो अवस्थामा मेचको पुस बटन अलिकति दवाएर पछिल्लो समयमा विचरणगर्दा मज्जा नै आउला ।केही समयपछि जनता–जनार्दनले स्वर्गवासी गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि बिर्सिनेछन । किनभने, उनले पनि जनताको हितमा पाटी पौवा, सडक कुलो, स्कूल अस्पताल केही बनाएका छैनन । तर, उनले देशका लागि योगदान दिएका छन । माओवादीसंग वा¥ह सूत्रीय सम्झौता उनको त्यही योगदानको परिणाम हो । त्यो सम्झौता नभएको भए कसैले भन्न सक्दैन अहिले यो देश कता हुन्थ्यो । अराजकताको शिकार भै सकेको हुनेथियो । यसपछिको समयमा वा¥ह घोडे रथमा सवार भएर प्रचण्ड पथको वाटो आफनो गन्तव्य तर्फ लस्किएका स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जीवन सर्वसाधारण नेपाली जनताको नजरमा सर्वाधिक पूर्ण र सन्तुष्ट देखिएको थियो । २०४६ को जन आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्रीका हैसियतले दशौं वर्ष देश हांकेका नेताले दोस्रो जन आन्दोलनपछि पनि आफनो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने अवसर पाउनु प्रारव्धको खेलमात्र पक्कै थिएन । त्यतिवेला त प्रधानमन्त्री कोइराला राष्ट्राध्यक्षको हैसियतमा पनि थिए । त्यो हैसियतमा उनले राज्यशक्तिको परम्परागत प्रतीकका रुपमा रहेको गद्दी वैठकमा उभिएर इन्द्रजात्रा हेरे । कुमारीको दर्शनगरे । एउटा सामान्य नेपालीका लागि यो कल्पनातीत कुरा थियो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाका जीवनमा भने यी कल्पनातीत कुराहरु यथार्थ भइ सकेका थिए ।राजनीतिको व्यवसायमा आंट, हिम्मत र साहसका साथ खतरा मोल्नेहरु मात्र सफल हुन्छन, अरु सवै किनारा लाग्दछन । यो यथार्थ कांग्रेसभित्रै उपस्थित छ । जतिवेला नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता स्वर्गीय कृष्णप्रसाद भटटराई भैंसेपाटीको डेरावाट पार्टीले विरासतमा लगाएको संवैधानिक राजतन्त्रको दौरा सुरुवाल नफुकाल्न पार्टी महासमितिका सदस्यहरुसंग अरण्य विलापगर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यतिवेला प्रधानमन्त्री कोइराला वडो साहस र दम्भका साथ उनीहरुलाई गददी वैठकमा आफनो उपस्थितिको रोमांचक अनुभव वताउंदै थिए । नेपाली राजनीतिमा सन्त नेताका रुपमा स्थापित एउटा नेताको अनुहार पराजय भावले खुम्चिएको थियो र अदम्य साहसका लागि चर्चित अर्का नेताको चेहरा पराक्रम भावले प्रज्ज्वलित थियो ।यति हुंदाहुंदै पनि, दुइ नेतामा थुप्रै समानता विद्यमान थिए । दुवै नेता नयां नेपालका लागि सुयोग्य थिएनन । एउटाका लागि राजाले गर्दै आएको कामलाइ जनताका छोराले उसैगरि निरन्तरता दिनु नयां नेपालको निर्माण थियो भने अर्काका लागि राजाको घांटीमा संिवधानको लगाम लगाएर समाजलार्ई डोहो¥याउनु नै नयां नेपालको प्रतीक थियो । दुवैका मान्यता स्थापित शासकीय वर्गको हातमा रहेको सत्तालाई सम्पूर्ण रुपमा विस्थापनगर्नु थिएन । राज्य शक्तिमाथि जनताले किटानका साथ गरेको देशमाथि आफनो सार्वभौमिक अधिकारको दावी दुवै नेताका लागि सहज थिएन । दुवै नेता जन प्रतिनिधित्वको खानदानी परम्पराका सक्रिय विरोधी पनि थिएनन । एउटा नेता राजाको टोपी फुकालेर आपूmले लगाएपछि नयां समाजको निर्माण शुरु भएको ठान्दथ्यो । अर्को नेता, राजाको टोपी नफुकालीकन राजा र प्रजा मिलाएर, नयां समाजको निर्माणगर्न चाहन्थ्यो ।तर, राजनीतिमा मान्यता र कथनले के हुन्छ र ? नयां नेपालको नारा लगाउने नेताले नै नयां नेपालको सुस्पष्ट परिभाषा दिन नसकेको अहिलेको अवस्थामा नयां नेपालका लागि कोइराला सुयोग्य थिए कि अयोग्य ? यसको निक्र्योल गर्नु अव आवश्यक छैन । यति हो कि समय, परिस्थिति, नियति र अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिले प्रधानमन्त्री कोइरालाको आधिकारिकतालाई स्वीकार गरेको थियो । त्यतिबेला उनको हिस्सामा परेका थिए — पार्टीको सफल एकीकरण, संघीय गणतन्त्रतर्फको यात्रा, अपरिमित राजनीतिक शक्ति र आठदलका सबै नेताहरुवाट निर्विकल्प नेताको मान्यता । कोइरालाका लागि यो भन्दा वढी अरु के नै चाहिएको थियो र ? नयां नेपाल भनेको कविला हो कि टिम्वकटु ? सोच्ने काम समाजशास्त्री र इतिहासकारहरुको जिम्मामा थियो । कालान्तरमा उनीहरुले नेपाली राजनीतिको चिहान खोतल्ने निश्चित नै थियो ।प्रधानमन्त्री पद कोइरालाका लागि कहिल्यै पनि असहज रहेन । तर, सामाजिक आर्थिक र राजनीतिक विभेदले रन्थनिएका र राजाको मदमत्त शासनले आत्तिएका पचासौं हजार नेपालीले रगतको खोलो नवगाएको भए अहिलेको जस्तो अजस्र र अनवरत रुपले प्रवाहित राज्य शक्तिको उपभोग कोइराला मात्र होइन, अहिलेका कुनैपनि नेताका लागि सम्भव थिएन । मध्यरातमा दरवार हत्याकाण्डको जानकारी लिन छाउनी अस्पताल पुग्दाका प्रधानमन्त्री कोइराला र आजका प्रधानमन्त्री कोइरालाको व्यक्तित्वको तुलना नै सम्भव छैन । प्रशासकीय हिसावले प्रधानमन्त्री कोइरालाको शासन कहिल्यै लीकमा रहेन । कम्तीमा पनि उनले राजनीतिक पध्दतिको गोरेटो वनाइ दिन्छन कि भन्ने आशाले जनताले सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार, विग्रेका वाटाघाटाहरु र पानी पंधेराका कुरा उठाउन चाहेका थिएनन । कपिलवस्तुमा साम्प्रदायिक आगो सल्कियोस कि पहाडमा झाडा पखाला चलोस, त्यतिबेला समस्यालाई ।।।व्दन्व्दपछिको संक्रमणकालमा यस्तै हुन्छ र यसलाई सके पनि नसके पनि जनताले सहनु पर्दछ । त्यसपछि मात्र शान्ति आउंछ’ भनिन्थ्यो । यस्ता कनीकुथी वाक्यहरु जनताले संधै सुन्ने गरेका थिए । त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कोइराला ब्यक्तिगत रुपमा पनि सन्तुष्ट थिए होलान । राजनीतिमा यत्रो सफलतापछि आत्मतुष्टि उनको अग्राधिकार पनि थियो । यद्यपि, उनको यात्रा कहिल्यै सुरक्षित देखिएन । एकपटक प्रचण्ड पथमा निर्विध्न चल्दै आएको उनको शासनको रथ एक्कासी ट्राफिक जाममा परेपछि गाडी अगाडि वढन सकेन । पछाडि फर्किने ठाउं थिएन । अध्यक्ष प्रचण्डले बाटोमा पथकर लगाइ दिएका थिए, चर्को पथकर । स्वभावतः प्रधानमन्त्री कोइराला त्यो पथकर तिर्ने पक्षमा थिएनन । दुवै नेताले एकअर्कालाई झुक्याउंदै थिए । ।।।रुख त वेलकै होला, त्यसो भएपनि, हामीले भनेपछि त्यो भोगटेकै रुख हो’ भन्ने आत्मदम्भबाट किंचित माथि उठन नसकेका वा उठन नचाहेका माओवादीहरु उतिबेला पांच महिना प्रधानमन्त्री कोइरालाको शासनको रथमा सफर गरेर सडकमा ओर्लिएका थिए । अहिले दश महिनादेखि उनीहरु केरुङबाट काठमाडौं आउने रेलको टाइम टेबल बनाएर बसेका छन । पार्टी एक भएपछि सरकार आफनो पनि भएको छ । यसमा धेरै ठूलो उथुल पुथल र उत्पात मच्चाउन सकिने सम्भावना छैन । त्यतिबेला गिरिजाको नेतृत्वबाट उम्किएर उनीहरु सरकार वाहिर आएका थिए । मन्त्रीहरुले सरकार छोडेपनि प्रतिशोधको राजनीतिमा लागेका कार्यकर्ताहरुले सत्ताको मोह त्यागेका थिएनन । उनीहरु पेलेर, दवाएर, तर्साएर जसरी पनि आफनो वर्चस्वको झण्डा गाडन व्याकुल थिए । केही आफना लागि र केही पार्टीका लागि आम्दानीको स्रोत हुनु पर्दछ भन्नेमा माओवादीहरु उत्तिकै व्यवहारिक पनि देखिएका थिए । कुरा त अहिले पनि त्यही हो । परिस्थितिमात्रै डेब्रिएको छ ।समय एकपटक फेरी नेपाली राजनीतिको पूर्ण परिक्रमामा नै लागेकोछ । यतिवेला नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी वग्गीको पछाडि घोडा वांधेर लोकतान्त्रिक समाज वनाउने उपक्रममा जुटेको छ । अहिले भर्खर नेपाल वायु सेवा निगमको वाइड बडी खरीदमा संसदको लेखा समिति अन्तर्गतको उप समितिले तयार गरेको रिपोर्टमा सत्तापक्षले असहमति जनाएको छ । सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा ठूलै टक्कर त नहोला, तर राजधानी शहरका चिया कपहरुमा तूफान ल्याउन यो झगडा पर्याप्त होला । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको दुइ सदस्यीय नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तित्व चाहीं कुनै अदृश्य रसायनवाट जोडिएका जस्तो लाग्दछन । उनीहरुको राजनीतिक शैलीमा कुनै समानता देखिदैन । भावात्मक रुपले पनि सामीप्यमा कहिल्यै नपुगेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड वीच रहंदा बस्दा दूरी आउने निश्चित नै छ । त्यसो त, अहिले प्रकटमा कुनै त्यस्तो दूरी देखिएको छैन । प्रचण्डले जे आशा र अपेक्षा गरेका होलान त्यो छिटै यथार्थमा परिणत होला पनि र केही समय लाग्ला पनि । प्रचण्डले पार्टी एकता आपूm जोगीहुन गरेका पक्कै होइनन । उनको नेतृत्वको माओवादी पार्टीको सम्मिलनपछि ओली नेतृत्वको एमालेमा लोच आएको छ । सवै दलका लागि संघीय गणतन्त्र अपरिवर्तनीय कार्यसूची भइ सकेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा नेकपाले हांकेको शासनको रथ नेपालका शहर बजारमा निर्बिध्न हिंडने सहज वातावरण देखिएको छ । त्यसका लागि ओली पथमा हिंडेका कार्यकर्ताले नारा लगाउने आवश्यकता नै पर्ने छैन ।